ध्यानले बढाउँछ खुसी: अमेरिकी वैज्ञानिक « प्रशासन
ध्यानले बढाउँछ खुसी: अमेरिकी वैज्ञानिक
काठमाडौं । मानिस केले खुसी हुन्छ ? खुसीका मापन अनि सीमा के–के हुन् ? लामो समयदेखि यी दार्शनिक जिज्ञासामाथि बहस अनि घोत्ल्याइँ जारी छ।
साइकोलोजी तथा साइकियाट्रीका प्राध्यापक डेभिड्सनका ‘द इमोसनल लाइफ अफ योर ब्रेन’, ‘द माइन्डस् ओन फिजिसियन’ जस्ता चर्चित किताब प्रकाशित छन्। लामो समयदेखि न्युरोसाइन्स र ‘मेडिटेसन’सम्बन्धी अनुसन्धान गर्दै आएका उनले चार दशकदेखि ध्यानको अभ्याससमेत गर्दै आएका छन्।
आफू ‘न्युरोसाइन्टिस्ट’ भए पनि ध्यानले मस्तिष्कमा कस्तो असर गर्छ भन्ने विषयप्रति चासो भएकाले प्रत्यक्ष अनुभवका लागि ध्यान गरेको उनको दाबी छ। ‘ध्यानबाट प्राप्त हुने अनुभवले मलाई वैज्ञानिक खोजलाई अझै गहिराइमा पु¥याउन मद्दत गरेको छ,’ उनले अनुभव बाँडे।
दलाई लामाको प्रेरणाले ‘न्युरोसाइन्स’ र ध्यानसम्बन्धी अनुसन्धान अगाडि बढाएको डेभिड्सनले बताए। सात वर्षअघि डेभिड्सन र उनको टिमले ध्यान अवस्थामा बौद्घ भिक्षुको मस्तिष्कको अवस्था कस्तो हुन्छ भनी अनुसन्धान गरेको थियो।
इइजी, एमआरआई र एफएमआरआईको सहायताबाट ‘ब्रेन स्क्यान’ गर्दा अन्य साधारण व्यक्तिको भन्दा ध्यान गर्ने व्यक्तिको मस्तिष्कको तरंग फरक पाइएको थियो। सतिध्यान (माइन्डफुलनेस), करुणा (कम्प्यासन) र संज्ञानात्मक उपचार (कोग्न्याटिक थेरापी) लगायत विषयमा उनका दर्जनौं अनुसन्धानमूलक लेख विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय जर्नलमा छापिएका छन्। आजको नागरिकमा खबर प्रकाशित छ ।